Ngaba Singacela Ukubulala Ukuqwalaselwa Kwintsomi? | Martech Zone
Ngaba Singacela Ukubulala Ukuqwalaselwa Kwintsomi?
NgoLwesibini, Agasti 20, 2019 NgoLwesibini, Agasti 20, 2019 Douglas Karr
Zama kangangoko ndinako Ukuphelisa intsomi yokuncipha kwengqwalaselo, iyaqhubeka nokulawula indlela yokubonisa intengiso kunye neentetho eziphambili. Ke ndiye ndasebenza nomlingane wam e I-Ablog Cinema ukuvelisa eyokuqala kuthotho lweevidiyo ezichitha ezinye zeentsomi kunye nemibono ephosakeleyo kwi-intanethi… kunye nokuzisa ezinye zeerandi zam kuluntu.
Yenza iiposti zebhlog yakho zibe mfutshane, yenza iividiyo zakho zibe mfutshane, yenza imizobo yakho ibe lula… uluhlu lweengcebiso ezoyikekayo luqhubeka njalo. Kwaye i ingqalelo intsomi khange isasazwe nje kuphela ngabathengisi, ikwasasazwa ziindaba ezinkulu, kubandakanya Iphephancwadi lexesha, i Telegraph, i Guardian, USA namhlanje, i ENew York Times, i YeSizwe Iposi, IHarvard kwi Irediyo yase-US nakwincwadi yolawulo Brief. Ugh.
Ngombulelo, elinye ijelo leendaba lenze lo msebenzi laphanda intsomi yokuba Ukuqwalaselwa komntu kuyancipha… I BBC. Umbhali uSimon Maybin uqhakamshelane nomthombo wedatha-iZiko leLizwe leNgcaciso ye-Biotechnology kwiThala leLizwe laseMelika lezeMithi, kunye ne-Associated Press- kwaye abanakho fumana nayiphi na irekhodi zophando ezixhasa izibalo.
Ku, ukanti, esinye isigqebelo… uSimon uyakufumanisa oko igolide eneneni abanalo ingqalelo emfutshane, nokuba!
Ngoku sihlala kwihlabathi apho yonke into ifunwa khona kwaye ngokoqobo kwizandla zethu. Nantsi eminye imizekelo:
seo -Ndikhangele uncedo ngale ntsasa kwikhowudi ethile endiyibhalayo. Ndicofe iziphumo zokuqala kwiphepha lesiphumo seinjini yokukhangela kwaye khange ndiyifumane into ebendiyifuna. Ndiphinde ndaphinda ndakhangela uphando ngeendlela ezimbalwa kwaye ekugqibeleni ndafumana olona lwazi ndilifunayo. Ngaba oko kuthetha ukuba ixesha lam lokuqwalaselwa lalifutshane kuba ndichithe ixesha elincinci kwisiphumo ngasinye sophando? Hayi, oko kwakuthetha ukuba ayifanelekanga kwaye ndiqhubekile ndikhangela ulwazi endiludingayo de ndilufumane. Ingqwalaselo yam ayikaze, yonke iyaphambuka kulomsebenzi uwenzileyo… kodwa ukhetho lwenzile.
Umsindo kunye nevidiyo -Ndiyakuthanda ukumamela iipodcast kunye nokubukela iividiyo, kodwa andinawo umonde wokuphelisa izithethi okanye zokuzazisa. Ndiza kutsiba ukuphulaphula okanye ukubukela iividiyo ngokuqhubekayo… ndide ndifike kwisiphumo apho umgangatho kunye nemveliso indibonelela ngale nto ndiyifunayo. Kwaye ndingamamela iiyure ukuba isihloko sinolwazi kwaye siyonwabisa. Siphila kwihlabathi lokubukela ukutya okune-binge kwividiyo… abantu, akukho miba ithathela ingqalelo kwimpelaveki yeMidlalo yeTrone!
I-AJ yenza umsebenzi omkhulu wokwabelana ngeevidiyo apho abantu ekujoliswe kubo baphakathi kweminyaka esithoba kunye neminyaka elishumi elinesihlanu ubudala! Kuyo yonke imbali, ii-curmudgeons ezindala ziye zalwa nabantu abancinci ukuba banike ingqalelo… kwaye aba bantu baseYoutubers bayakwazi ukufumana iibhiliyoni zeembono zeevidiyo ezihlala ngaphezulu kweyure.
Into ulutsha lwethu olunayo ebesingenayo kukukhetha kunye nokulula.
Ke oko kuthetha ntoni kubathengisi?
Ndingacelomngeni kubathengisi ukuba bahambe kwelinye icala. Ukubonelela ngamanqaku anzulu, iitoni zezibalo, ingcebiso eluncedo, i-infographics, iividiyo, kunye neepodcast ezingena nzulu kwizihloko ezinomdla kubaphulaphuli bakho ojolise kubo. Siyaqhubeka
Wonke umthengi ophuhlisa ifayile ye- ilayibrari yomxholo kuba ngezi ziziba zinzulu zivelisa iziphumo ezimangalisayo kubo. Ngokuqinisekileyo… ezinye iindwendwe ezingabalulekanga ziskena kwaye zihambe… kodwa abakhangeli abafuna ulwazi bahlala, badle, babelane, kwaye bazibandakanye kulwazi olunikiweyo. Ukuba ufuna ukuphumelela kumxholo, yeka ukuvelisa imijelo engapheliyo yomxholo we-junk kwaye ubonelele ngomgangatho ophezulu, umxholo onika ulwazi ofuna ukujongwa ngabaphulaphuli bakho!
tags: ingqalelo intsomiIiVidiyo zeNtengisoiingcamango eziphosakeleyo
Iindlela ezi-7 zetekhnoloji ezinokuthi zonakalise uphawu lwakho